नाम उपचार, काम दुराचार- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
नाम उपचार, काम दुराचार
बिहीबार प्रकाशित उपचार भन्दै यौन शोषण सम्बन्धी समाचारले हाम्रो समाजमा अझै पनि कैयन नारी यौन पिपाशुहरूबाट बलात्कृत र यौन शोषित हुनुपरेको यथार्थ फेरि एकचोटी सार्वजनिक भएको छ  । धर्मको नाममा टुल्कु लामाले गर्दै आएको कर्तुत र तत्सम्बन्धी अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ  ।
तर हाम्रो समाजभित्र शताब्दीऔंदेखि यौन सम्बन्धमा खुला छलफल र बहस वर्जितजस्तै बन्नुले टुल्कुजस्ता दुराचारीहरूको मनोबल बढ्दै गएको हो । यौन सम्बन्धी हाम्रो मौनता नै बलात्कारी र यौन दुराचारीहरूको बलियो हतियार हो । हामीले समाजमा बालबालिका तथा महिला यौनहिंसाको बारेमा समाजका हरेक तह र तप्कालाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि हाम्रा सामाजिक संरचनाहरू जस्तै– आमा समूह, महिला सहकारी, वन समिति, बाल क्लबहरू, विद्यालयहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ र मौनतालाई तोड्दै यौनजन्य विषयमा छलफल गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न जरुरी छ । जबसम्म परिवार, आफन्त र साथीसंगीबीच यौनबारे खुलेर आफूमथि भएको वा हुने गरेको घटनाबारे छलफल गर्न र एकआपसमा कुराकानी गर्ने बानीको विकास हुँदैन, तबसम्म हाम्रो समाजमा यस्ता खाले घटनाले प्रश्रय पाइरहन्छ । तसर्थ यौनबारे खुलेर छलफल गर्न हामी आफैले आजैबाट सुरु गरौं र यौनजन्य हिंसाको न्यूनीकरणमा सहयोग गरौं ।
– सानु गिरी, सिद्धलेक–७, धादिङ
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ११:४१
वास्तविकतासित मेल नखाने दाबी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार नेकपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा मिथ्या दाबी गरेका छन्  । उनले आफ्नो सरकारले निकै राम्रो काम गरेको तर आँखा चिम्लिनेहरूले त्यो देख्न नसकेको आरोप लगाएका छन्  ।
तर उनको त्यो दाबी वास्तविकतासँग कतै मेल खाँदैन । उनले सरकारको कामबारे गरिब जनताको रगत–पसिनाबाट उठाएको राष्ट्रकोषबाट वृद्धवृद्धालाई भत्ता बढाउँदैमा देशको विकास भएको मान्नु कमजोरी सिवाय केही होइन । यो कुनै गर्वको विषय होइन । उनले आफ्नो १८ महिने सत्ता सञ्चालनमा देशमा कति रोजगारी बढाए ? कति उद्योग, कलकारखाना बढाए ? कति निर्यात बढाए ? २१ वटा गौरवको आयोजना कुन हालतमा पुर्‍याए ? त्यो तथ्याङ्कसहित बताउन सक्नुपर्छ । उनको पालामा न तामाकोशी पूरा भयो नत मेलम्ची नै । न कलङ्की नागढुङ्गा सडक पूरा भयो नत बौद्ध–जोरापाटीको नै । फास्ट ट्रयाकको प्रगति केवल ८ प्रतिशतमा सीमित छ र पनि प्रधानमन्त्री ठूला कुरा गर्छन् । आधारहीन फुइँ लाउँछन् । आँखा चिम्लिएको आरोप लाउँछन् । जनताको आँखा सद्दे छ, प्रधानमन्त्रीज्यू । विकास र समृद्धिको कुरा प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट होइन, जनताले महसुस गर्ने विषय हो । सरकारले कस्तो काम गरेको छ, त्यसबारे आम जनताले भनिहाल्छन् नि । अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरेको कामबारे जनता जनार्दनलाई सोध्ने हो भने आफै सत्य उद्घाटित हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तीर्णाङ्क ल्याउन पनि हम्मे–हम्मे पर्नेछ ।